64 muslimiin ah oo la xasuuqay. - Caasimada Online
Home Warar 64 muslimiin ah oo la xasuuqay.
64 muslimiin ah oo la xasuuqay.
Sawirro ay dayax-gacmeed ku qaadday hay’adda Human Rights Watch waxay muujinayaan caddeymo aad u xun ee mujtamac dhan oo la burburiyay galbeedka dalka Burma toddobaadkan.
Deegaan dhan oo ka tirsan magaalada Kyaukpyu ayaa u muuqda in gebi ahaanba la gubay oo dhulka lala simay.
Human Rights Watch waxay sheegaysaa in dadka halkaas deggan badankoodu ay ahaayeen Muslimiinta Rohingya, kuwaas oo weerar ay la beegsadeen dadka reer Burma ee aan muslim-ka ahayn oo sheegaya in muslimiintu aanay dalka waxba ku lahayn.
Kooxuhu waxay sheegeen in dhismayaal ka badan 800 iyo guryo doonyo ka samaysan la baabi’iyay. Dadkii halkaas ku noolaa badankooda waxaa loo maleynayaa inay doonyo ku carareen oo xagga badda ay mareen.
Dadka aan muslimiinta ahayn waxay ku warramayaan in iyaga xataa markan ay ciidammada dowladdu xabbado ku fureen intii ay rabshaduhu socdeen, khasaarooyin badanna ay ka soo gaareen.
Dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow deegaannada dhibaatadu ka dhacday, hase ahaatee jawaabta ay ka bixisay tan iyo markii ugu horreysay ee dagaalku qarxay bishii June ee la soo dhaafay waxaa si weyn loogu dhaleeceeyay inaysan wax ku filan ka qaban.
Sidoo kale aqri
Maxaad kala socotaa Burma iyo xasuuqa Muslimiinta ku nool?